पर्वतको कुनपा ७ दुर्लुङमा वेवारिसे अवस्थामा वृद्धा भेटिएकै दिन फ.न.पा. सात मा पनि अर्कि त्यस्तै वृद्धा फेला - Darpanpost
» फोटो दर्पण » समाज अंक: 7921
पर्वतको कुनपा ७ दुर्लुङमा वेवारिसे अवस्थामा वृद्धा भेटिएकै दिन फ.न.पा. सात मा पनि अर्कि त्यस्तै वृद्धा फेला
Darpanpost शुक्रबार, माघ १९, २०७४ मा प्रकाशित
निर्मल पौडेल माघ १९ सामुदायिक रेडियो कुशुम कुश्मा पर्वत
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका ७ दुर्लुङ्गमा वेवारिसे अवस्थामा एक वृद्धा भेटिएर वृद्धाको खोजिकार्य गरिदन स्थानियले अनुरोध गरैकै दिन फलेवास नगरपालिकामा ७ मा पनि एक त्यस्तै एक वृद्धा फेला परेकी छिन् । आफनो परिचय दिन नसक्ने अन्दाजी ६५ वर्षीय ती वृद्धा करिव
५ दिन देखी साविकको लिमिठाना वार्ड नं १ मा रोडमा वस्तै आएकी स्थानिय सिर्जना तिमिल्सनाले वताएकी छिन् । वृद्धालाई तिमिल्सिनाले ४ दिन देखि खाना खान दिएपनि घरमा वस्न र सुत्न नमानी नजिकको वाटोमा नै गएर सुत्ने गरेको तिमिल्सनाले वताएकी छिन् । तिमिल्सनाले बृद्धाको आफन्तको खोजी गरिदिन उहाँले स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्नु भएको तिमिल्सिनाकी छोरी लिमिठाना माईत भई कुश्मा राममन्दिर घर भएकी तिमल्सनाकी छोरी वनिता अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
यता अन्दाजी ८० वर्षिया बृद्धा माघ १५ गतेका दिन दुर्लुङमा भेटिएकी हुन् । आफ्नो परिचय स्पष्ट दिन नसक्ने उनी ४ दिनदेखि दुर्लुङका स्थानीयबासीको संरक्षणमा बस्दै आएकी छिन् । देख्दा सफा सुग्घर र हिडडुल गर्न सक्ने तर आफ्नो परिचय दिन नसक्ने भएकाले पहिचान गराउन अप्ठ्यारो भएको स्थानीय गोलमान गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङले बृद्धाको आफन्तको खोजी गरिदिनजिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत बृद्धाको आफन्त खोजी कार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।